Sharci "dhigaya in dalka laga furi karo Kaniisado" oo BF la horgeeyay
Sharci “dhigaya in dalka laga furi karo Kaniisado” oo BF la horgeeyay
BF oo la horgeeyay sharci “dhigaya in dalka laga furi karo Kaniisado”
MUQDISHO, Soomaaliya – Axdiga Ilaalinta Hiddo Dhaqameedka Xiliyada Colaadaha ayay Xildhibaanada Arbacada maanta ah Golaha Shacabka geliyeen dood markii ay horgeysay Wasaaradda Waxbarashadda.
– Lama soo saari karo shuruuc ka hor imaaneysa shureecada Islaamka.
“Xiligan la joogo dhibaatada furan oo feker Diini ah, hadii aan xeerkan ogolaano, oo la guda galo Kaniisada dhisitaankeena, waxaan is-leeyahay buuq fara badan ayaa nagu furmaya,” ayuu yiri mudane kale oo hadlay.
Xubno kale oo qaba aragti midaan ka duwan ayaa ka hadlay fadhiga, kuwaas oo taageeray sharcigan, iyaga oo cod dheer ku dalbaday in la dedejiyo meelmarinta sharciga oo akhrinta saddexaad la marsiiyey.
“Sharcigan waxaan u arkaa mid wanaagsan oo waxtar leh. Meelaha laga dhaliilayo ee xagga Diinta. Dalkan sanado badan ayuu gumeysi soo haystay oo Kaniisado ka dhisnaayen,wax naga halaabay ma aanan arkin,” ayuu ku doodey.
Soomaaliya oo ah dal dhaca Geeska qaaradda Afrika isla markaana leh xeebta ugu dheer mandiqada derisna la ah dalal Masiixiyiin ah ayaa dadkiisa waxay boqolkiiba boqol yihiin dad Muslimiin oo Sunni.